इथियोपियामा जहाज खस्दा काठमाडौँमा शोक – जलजला अनलाइन
इथियोपियामा जहाज खस्दा काठमाडौँमा शोक
Posted on March 11, 2019 Author Jaljala Online	Comments Off on इथियोपियामा जहाज खस्दा काठमाडौँमा शोक
फागुन २७, काठमाडौं । अफ्रिकी मुलुक इथियोपियामा आइतबार यात्रुवाहक जहाज दुर्घटनामा पर्‍यो। सात समुद्रपारिको यो घटनाको आइतबार साँझसम्म नेपालसँग कुनै सम्बन्ध थिएन। तर आइतबार रातिदेखि त्यही घटनाले नेपालमा पनि शोक परेको छ।
यो खबर प्रशन्न पोखरेलले सेतोपाटीमा लेखेका छन्, इथियोपियाको आदिस आबाबामा आइतबार जहाज खस्दा गोरखा छेपेटारकी २८ वर्षीया एकता अधिकारीको निधन भएको छ। उनी विश्व खाद्य कार्यक्रम इथियोपिया कार्यरत थिइन्।
जहाज दुर्घटनामा एकताको मृत्युको खबरले काठमाडौं बनस्थलीको उनको घरमा अहिले आफन्त भेला भएका छन्।
एकता गत दशैंपछिमात्र इथियोपिया गएकी थिइन्। त्यसअघि उनले तीन वर्ष विश्व खाद्य कार्यक्रम नेपालमा लजिस्टिक अफिसरको रूपमा काम गरेकी थिइन्। अन्तर्राष्ट्रिय कन्सल्ट्यान्ट बन्ने उनको सपना थियो।
काठमाडौंको निलगिरी स्कुलबाट एसएलसी पास गरेकी एकता आइएस्सी सकेर बेलायत पढ्न गएकी थिइन्। पढाइ सकेर उनी नेपाल फर्किइन् । २०७२ को भूकम्पपछि उनले विश्व खाद्य कार्यक्रममा लजिस्टिक अफिसरको रूपमा काम सुरू गरेकी थिइन्।
‘एमएसी गरेर युएनमा नाम निकालेर काम गर्दै थिइन्,’ एकताको ठूलाबुवा ईश्वरबाबु अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने, ‘तर राम्ररी करिअर बनाउन नपाउँदै दुर्घटनामा परिन्।’
एकतासँगै काम गरेकी डब्लुएफपीको काठमाडौंस्थित कार्यालयकी केसाङ लामाका अनुसार उनी महिना दिन अघि नेपाल आउँदा आफ्नो पुरानो अफिस पनि गएकी थिइन्।
‘जहिल्यै रमाइलो गरिराख्नुपर्ने उनी अहिलेको जीवन र जागिरसँग उनी निकै खुसी देखिन्थिन्,’ केसाङले भनिन्। गोरखाको मीरकोटमा पुर्ख्यौली घर भएका अधिकारीको परिवार पछिल्लो समय गोरखाको छेपेटारमा बस्थे।
एकताको बुवा आमा र भाइ काठमाडौंको घरमा बस्छन्। एक महिनाअघि एकताका आमाबाबु अमेरिका गएका थिए। विवाहित दुई छोरीहरूलाई भेट्न उनीहरू बेलाबेलामा अमेरिकामा जान्छन्।
आइतबार एकता राष्ट्रसंघीय वातावरण सभामा भाग लिन इथियोपियाबाट केन्या जाँदै गर्दा इथियोपिएन एयरलाइन्सको ७३७ बोइङ जहाज दुर्घटनामा परेर एकताको निधन भएको थियो।
जहाजमा एकतासहित ३३ मुलुकका १५७ जना यात्रुको मृत्यु भएको थियो। जहाजमा १४९ जना यात्रु र चालक दलका सदस्य ८ जना थिए।
एकताको निधन भएको खबर पाएपछि बाबु आमा अमेरिकाबाट नेपाल आउने तयारीमा छन्।
‘दाइभाउजु अमेरिका हुनुहुन्छ। नेपाल आउन सक्नुभएको छैन। आउनुहुन्छ,’ एकताको काकाले सेतोपाटीसँग भने, ‘अन्तिम संस्कारसहितका काम काठमाडौंमै गर्ने भन्ने छ। अहिले केही तयारी छैन। शव आउन समय लाग्ला।’
दाङका सडक प्रदेशको प्राथमिकतामा परे, कुन-कुन सडक परे ?
Posted on September 7, 2018 Author Jaljala Online
भदौ २२, दाङ । दाङ उपत्यकाको प्रवेशद्वार कुहिरेपानीदेखि सिधा सर्रा जोड्ने वाईपास सडक निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले १० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । यो खबर नवीन अभिलाषीले दाङखबरमा लेखेका छन्, सडकको स्तरोन्नति गर्दै कालोपत्रे गर्न चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले १० करोड वजेट छु्ट्याउँदै कुहिरेपानी सर्रा सडक खण्डलाई आफ्नो मातहतमा ल्याएको हो । […]
एमाले-माओबादी एकताबारे टोपबहादुर रायमाझीको आयो यस्तो कडा प्रतिक्रिया
Posted on March 27, 2018 Author Jaljala Online
चैत १३, बुटबल । पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले चित्त बुझदो नभए पार्टी एकता नहुने बताएका छन् । रिपोर्टस क्लव नेपाल पाचँ नम्बर प्रदेशले बुटबलमा गरेको साक्षात्कारमा रायमाझीले पार्टी एकता समान हैसियतमा मात्र एकता हुने बताए । उनले भने, ‘आफनो औकात अनुसारको हैसियतमा मात्र एकता गर्छौँ, सम्मानजनक र समान हैसियतले नभए पार्टी एकता हुँदैन ।’ उनले […]
सल्यानमा रहेको ‘रेडियो तहल्का’ एफएम चौथो बर्षमा प्रबेश
Posted on April 4, 2018 April 4, 2018 Author Jaljala Online
चैत २१, सल्यान । सल्यानको रेडियो तहल्का आजदेखि ४ बर्षमा प्रबेश गरेको छ । वि.स. २०७१ साल चैत २१ गतेदेखि आफ्नो नियमीत प्रशारण गरेको रेडियोले आज ३ बर्ष पुरा गरेर ४ बर्षमा प्रबेश गरेको हो । खबर, जनजागरण र मनोरञ्जनलाई आत्मसाथ गर्दै रेडियो तहल्का अहिले विहान ५ बजे देखि राती १० बजेसम्म दैनिक १७ घण्टा […]
इथियोपियन एयरलाइन्स दुर्घटनापछि चीनले गर्यो यस्तो आकस्मिक निर्णय
को हुन् विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकी एकता अधिकारी ?